Caashaqa Cayaaraha Caloosha Laab Weyn 158CM Dhexda Yar ee Galmada Doll Rin
Dolls Galmo Jinsi ah,Jinsiyadaha jinsiga ee Japan,Naasaha waaweyn caruusadaha galmada,F koob caruusadaha galmada
brand: Dhismaha Dollhouse 168
Save 5% $ 2,265.44 $ 2,166.94
Sheekada taariikh nololeedka Rin:
Rin waxaa loogu talagalay in lagu daaweeyo dhammaan gaajadaada galmada oo habeennadiinna laga dhigo kuwo sixran. Qof walba wax bay u haysaa. Iyadu waa dabacsan tahay oo firfircoon, kuu oggolaanaysa inaad ku raaxaysato jagooyin badan oo galmo iyada ah. Waxay muujineysaa haweeney casri ah oo xishood la’aan diyaar u ah inay jiifsato oo qanciso baahiyaheeda jir.
Rin waa shiine. Waxay leedahay naaso qurux badan oo F-cup ah. Dad badan ma caawin karaan laakiin waxay rabaan inay leefleecaan. Iyadu waa dhakhso badan tahay, caddaalad tahay, laga yaabee inay xoogaa qabow tahay. Tani waa wax caadi ku ah asxaabta ku hareeraysan. Waxay ku dhalatay qoys caadi ah oo ku nool caasimadda. Waxay waligeed ahayd gabar aad u madax-bannaan. Waxay ka guurtay guriga ilaa ay ka gaadhay 15 jir. Bilow inaad raadiso nolol aad ubaahantahay. Ka dib markay guurtay, waxay la kulantay dib u dhacyo badan. Laakiin waligeed isma dhiibin. Caqligeeda iyo xamaasadeeda, waxbaa ka hor istaagi kara inay gaarto awooddeeda buuxda. Waxay dhawaan noqon doontaa xoog lagu xisaabtamo. Si aad ula kulanto dhibaatooyinka nolosha, naftaada yaan la dilin. Waxay had iyo jeer ku adkeysataa jirdhiska. Tani waxay ilaalin doontaa iyada maskax ahaan wanaagsan. Waxay sidoo kale badbaadin kartaa naftaada dhibaatada. Laakiin yaa dhab ahaan og waxa dhici doona; waxay wali isku dayeysaa inay horumariso xirfadaheeda. Waxay dareensan tahay in adduunku ka badan yahay inta aan ognahay. Nasiib wanaagse, waxay leedahay saaxiibo dhowr ah oo wanaagsan oo taageera.
Liiska xirmooyinka Rin:
Dhererka ： 62 inji (158cm)
Miisaan ： 62 lbs (28kg)
UstDayaanna ： 28 inji (70cm)
Dhexda ： 23 inji (59cm)
Miskaha ： 29 inji (74cm)
Siil ： 5.5 inji (14cm)
Futada ： 3.9 inji (10cm)
Dhererka gacanta: 18.9 inji （48cm）
Ballanqaadkayaga: * Dhammaan alaabooyinka caruusadaha galmada lagu geeyo waa lacag la’aan. Ma jiraan ajuuro qarsoon. * Sanduuq gaar ah oo loogu talagalay kaydinta iyo daabulida caruusadaha galmada. Kuwa kale uma aqoonsan karaan inay tahay doll ka baxsan - ilaalinaysa arimahaaga gaarka ah. * Caruusadeena dhabta ah waxaa laga sameeyay silikoon caafimaad oo aamin ah oo aan sun lahayn (...
Louise - Naasaha Weyn ee Naasaha Weyn 171CM TPE Love Doll
Qurxinta Qaangaarka Kirismaska ​​Vanessa Big Naaso Lugaha Dheer Adult Enti ...
Sheekada asalka ah ee Vanessa Bal qiyaas naag edeb leh, adeecsan oo waji iyo muuqaal qurux badan leh, sida iyada oo kale. Ma dhicin inaad diido dalabkan. Qiyaas in quruxdan ku noolaanshaha dalka aaney saameyn ku yeelan silsiladaha magaalada ku badan? Iyadu ma xishoonayso inay muujiso jirkeeda aan fiicnayn, especia ...
Akiraer - Piper 160CM G koob EVO Qalfoofka Dhaqdhaqaaqa Eyeball Platinu ...
PIPER platinum silicone doll doll: 1. Qurxiyo-macquul ah oo bilaash ah; 2. Kordhinta bilaashka ah ee qalfoofka EVO; 3. Kubbadaha indhaha ee la dhaqaajin karo oo bilaash ah, qurxiyo waara; 4. Kordhinta bilaashka ah ee naasaha jelly (Dareemo jilicsan oo raaxo leh); 5. Foomka buuxinta safka si loo yareeyo miisaanka; 6. Waxaa jira dusha sare sudhan (jillaab bilaash ah); 7. ...
Hilary - 156CM B-koob WM NO.153B Madaxa yar ee Ibliis Fiican ...
Wendy - 165CM D-cup WM NO.153 Doorka Madaxa ee Cayaaraha Maqaarka Maqaarka TPE ...